सैफ अलि खानले रानी मुखर्जीलाई किस गरेको त्यो भिडियो सामाजिक संजालमा अहिले किन भयो भाइरल ? – List Khabar
Home / समाचार / सैफ अलि खानले रानी मुखर्जीलाई किस गरेको त्यो भिडियो सामाजिक संजालमा अहिले किन भयो भाइरल ?
सैफ अलि खानले रानी मुखर्जीलाई किस गरेको त्यो भिडियो सामाजिक संजालमा अहिले किन भयो भाइरल ?
admin December 16, 2021 समाचार Leaveacomment 61 Views
कुराकानीका क्रममा रानी मुखर्जीले उक्त सिनका बिषयमा बताएकी थिइन् । उनले सैफ संग भनिन्– के तिमिलाई थाहा छ हामी किसिंग शटका लागि कति ड राएका थियौ । यस बिषयमा बोल्दै सैफ भन्छन्– मलाई यति याद छ कि यो शट गर्नका लागि तिमि कति डराई रहेकी थियौ । म सेटमा आउने बित्तिकै त्यो दिन तिमि म संग आएर एकदमै राम्रो बन्ने कोशिस गरिरहेकी थियौ । तिमि सोधिरहेकी थियौ डा«इभ कस्तो भयो, अनि के चलिरहेको छ खबर ।
Previous आजदेखि विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ काउन्टर पुस ५ गतेसम्मका लागि बन्द
Next ओ-मिक्रोन भाइरस विश्वभर अनौठो तरिकाले फैलिईरहेको भन्दै, निकालियाे यस्ताे ड`र लाग्दो विज्ञप्ति